Indawo yeSikhululo seenqwelomoya. Indawo ebanzi kakhulu kunye neComfy Suite - I-Airbnb
Indawo yeSikhululo seenqwelomoya. Indawo ebanzi kakhulu kunye neComfy Suite
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDinesh
Eli ligumbi elikhulu eliphindwe kabini kwigumbi lokulala kunye nesidlo sakusasa (isidlo sakusasa uyazikhethela), ilungele ishishini elindwendwelayo okanye undwendwe lolonwabo. Ngekhitshi elincinci kunye nendawo yokulala eyahlukileyo, likhaya elincinci kude nekhaya. Sikwenye yeendawo zokuhlala eziphambili, imizuzu nje embalwa ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye neyona mall ixakekileyo esixekweni-indawo efanelekileyo yokuqalisa ukungena esixekweni okanye ukuya kwiidolophu ezikwisathelayithi.
Indlu yesitudiyo yinxalenye yendlu yeendwendwe zeB&B enezinye iiyunithi ezifanayo nezincinci ngaphakathi kuyo. Ukutya kwasekuseni akubandakanyi kwizinga legumbi, kodwa kunokubonelelwa kwi-GHC25 yentloko nganye. Okunye ukutya akuphekwanga. Ukucocwa kwegumbi lakho kwenziwa yonke imihla, kwaye neenkonzo zokuhlamba iimpahla zobuqu nazo zinokubonelelwa ngomrhumo. Kukho iindawo zokutyela ezininzi kule ndawo ezinokuzisa ukutya ukuba ukhetha ukutya. Sineqela labanonopheli aba-2 abakwipropati ukususela ngo-7am ukuya ku-5pm. Kukwakho nesakhiwo sokuhlala kwikhomponi enye eneyunithi eziqeshelwe kwiindwendwe ezihlala ixesha elide.
4.90 out of 5 stars from 216 reviews
4.90 · Izimvo eziyi-216
Indawo yokuhlala yeSikhululo seenqwelomoya yaziwa njengenye yeendawo zokuhlala ezikumgangatho ophezulu esixekweni. Njengoko igama libonisa, isikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe sikufutshane, kunye neyona ndawo ixakekileyo yedolophu. Ungayibona le ndawo njengendawo efanelekileyo phakathi kwe-Osu edlamkileyo kunye ne-East Legon suburb.
Umbuki zindwendwe ngu- Dinesh
Abagcini bezindlu uDora noCindy, okanye mna ndisoloko ndifumaneka emini ukuze ndincede ngayo nantoni na onokuyidinga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Accra